Shiinaha Moto loogu talagalay C10 siman cagaha loogu talagalay soosaarayaasha alaabada
Hoyga > Qaybaha qalabka guryaha caaga ah > Cagaha iswaafajin kara > M10 cagaha siman ee alaabta guriga
Waa maxay cagaha alaabta guriga lagu hagaajin karo?
Cagaha lugaha la hagaajin karo, oo sidoo kale loo yaqaan 'pads pads', waxay isticmaalaan boolal si ay ugu xirmaan salka alaabta guriga (miisaska, kuraasta, kuraasta) si looga ilaaliyo dhulka inuu xirto, loo yareeyo buuqa, iyo in la kordhiyo dhererka alaabta guriga.
Baaxadda codsiga (jirka yar, ujeedo weyn): armaajooyinka / cagaha kabadhada, iwm. ku habboon munaasabado badan, khaanadaha miiska, iwm.
Waxaad u baahan tahay cag la hagaajin karo si aad u badbaadiso buuqa ka dhasha salka alaabta guriga maalin kasta iyada oo aan lahayn barkin marka ay dhaqaaqeyso, sidoo kale waxay ka hortagi kartaa dabaqa inuu xirto oo u oggolow alaabtaadu inay si deggan u isticmaalaan.
Bandhig Faneed: Naxdin iyo farsamo gacmeed, tuurista dunta, masaafada cadaadiska oo isku eg iyo muuqaal qurux badan, farsamo yaqaan
[Magaca Magaca]: Suufka la hagaajin karo
[Warshadaha Badeecadda]:Guangdong, Shiinaha
[Midab badeecad]: caag madow oo keliya / midabbo badan
[Adeegsiga badeecada]:Qalabka suufka la isku hagaajin karo
Cabir:M10 * L35
Tilmaamaha alaabta:xoog leh oo xasilloon, yaree dhawaaqa, ka ilaali dhulka waxyeellada
Isticmaalka alaabta:ku habboon kala-goysyada miisaska, miisaska, saxarada, iwm.
Maxaad noo dooratay:
Iibinta tooska ah ee warshad, farsamaynta habka
Xirxirida & rarkaeeM10 cagaha siman ee alaabta guriga
Waxay qaadataa bacaha balaastigga ah ee macmalka ah ee casriga ah, kuna daabacda astaantaada bacaha.
Xirmooyinka xirmooyinka ayaa la heli karaa.
Waxay kuxirantahay tirada dalabkaaga kadib amarka xaqiijinta.
Ku rarid hawada ama badda sida aad codsatay.
1. Ma leedahay warshad kuu gaar ah?
Haa, waxaan nahay soo saare dalka Shiinaha in ka badan 10 sano. Warshaddeena waxay ku taalaa Gobolka Guangdong.
2. Sideen ku soo booqan karaa warshaddaada?
Fadlan si naxariis leh noo sii ogeysii haddii aad qorsheyneyso inaad soo booqato. Waxaan ku tusi karnaa wadada ama kugu soo qaadan karnaa saldhigga ama garoonka diyaaradaha.
3. Miyaad bixisaa muunado bilaash ah?
Taasi dhib malahan, waxaan u diri karnaa muunadda bilaashka ah si tixraac loogu sameeyo.
4. Miyaad ku daabacan kartaa shirkaddayada LOGO magaca iyo baakadka?
Haa. Waan aqbali karnaa, taageerada ugu fiican ayaa la siin karaa macaamiisheenna.
5. Goormaad dhalaysaa?
Waxay kuxirantahay tiradaada amarkaaga, tiro yar ayaa alaabta soo gudbin doonta 7-7 maalmood. Haddii amarkaagu weyn yahay, wuxuu qaadanayaa 10-15 maalmood.
6. Sidee u ilaalin kartaa xiriir wanaagsan oo naga dhexeeya ganacsigeenna mustaqbalka fog?
a. Waxaan ilaalineynaa tayada wanaagsan iyo qiimaha kartida si loo hubiyo in macaamiisheena ka faa'iideystaan;
b. Waxaan u ixtiraameynaa macmiil kasta sida saaxiibkeen oo waxaan si daacad ah u ganacsi iyo saaxiibo la sameysanaa iyaga, iyadoo aan loo eegin meesha ay ka yimaadeen.
7. Haddii aan iibsano badeecadaada. Laakiin markii dhibaatooyinka tayada la helo, sidee loo xalliyaa?
Ka dib markii la xaqiijiyo, haddii dhibaatada tayada ay sababto annaga oo aan ahayn waaxda dibedda, waxaan u magdhabi doonaa qayb kasta macaamiisha.
Calaamadaha kulul: Cagaha siman ee M10 ee alaabta guriga, Shiinaha, Gawaarida, Soosaarayaasha